Updated5hours ago · Taken at SECCA Phoe Sein Office - _
မြန်မာအမျိုးသမီးများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ အထူး စီမံ ထုတ်လုပ်ထားသော " SECCA " Skin Care for MYANMAR Women အလှကုန် ပစ္စည်းသစ်များကို စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း
Office Address -----No. 70, Nat Mauk Lane 1 , Bo Cho ( 2) Ward, Bahan Township , YANGON, MYANMAR.
Contact Phone 01- 8604301 သို့ ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၂၀) ရက်နေ့ ၊ ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ် တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော launching ceremony အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးပါသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများနှင့် ဇနီးသည်များ ၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂိုလ်များ ၊ အနုပညာရှင် သူငယ်ချင်းများ ၊ စာနယ်ဇင်းမှ မောင်နှမ ၊ မိသားစုဝင်များ ၊ အထူး ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်ကြီးများ အားလုံး အားလုံးကို ချစ်ခင်စွာ ဖြင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့် :)
" SECCA " brand is notaNetwork Marketing .!!!
It isaSkin Care Products from private product of Japan for Myanmar Ladies, especially for their skin and special formulated product.
It is imported with Import License by Myanmar National ownership of SECCA Company.
It is also recognized as Beauty Product by FDA of Myanmar and Japan.
Our performances are direct delivery to our esteemed
Agents and door to door to our Individual customers.
Moreover,we are going to makeagrand Miss SECCA selection show in every season.
If you wish to use for your beauty, please call to........095170589 and come and visit to SECCA office --No.70, Natmauk lane (1) , Bo Cho (2) ward, Bahan Township, Yangon, MYANMAR.
Daw Su Ka Byar
♥ SECCA skin care ကို ၀ယ်‌ယူအား‌ပေးကြ‌သော မြန်‌မာနိုင်‌ငံ တစ်‌၀ှမ်းလုံး ရှိ
မိဘ ပြည်‌သူများ အတွက်‌ ရန်‌ကုန်‌ ၊ မန္တ‌လေး ၊ ပြင်‌ဦးလွင်‌ ၊ မုံရွာ
၊ရမည်းသင်း မြို့များရှိ ‌အောက်‌ပါ ဆိုင်‌များတွင်‌ လွတ်‌လပ်‌စွာ ၀ယ်‌ယူ
အား‌ပေးနိုင်‌ကြပြီ ဖြစ်‌ပါ‌ကြောင်း သတင်း‌ကောင်းပါးအပ်‌ပါတယ်‌ရှင်‌ :)
" ရန်ကုန်မြို့ တွင်SECCA Skin Care ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်သော ဆိုင်ခွဲများ "
ရန်ကုန်ရုံးချုပ် -- "SECCA Products Myanmar CO.Ltd"
ခြံ အမှတ် ( ၇၀ ) ၊နတ်မောက်လမ်းသွယ် ( ၁) နှင့်ဖိုးစိန်လမ်းထောင့် ၊ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတိုက်အနီး ၊ ဗဟန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Phone - 09 420745117 , 09253098969
ဆိုင်ခွဲ (၁ ) Ko Ko Beauty Saloon , No.F 6, Level 1 , Dagon center 1 , မြေနီကုန်း
ဆိုင်ခွဲ ( ၂ ) Beauty Box Spa, No. 14 , သမိန်ဗရမ်းလမ်းမကြီး ၊ တာမွေ Orange ကုန်တိုက် အရှေ့ ။
ဆိုင်ခွဲ ( ၃) Red Heart Beauty Spa , No. 25 , အရှေ့ဗဟိုလမ်း ၊ အရှေ
့မြောက် ရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်းမြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း 09 43168121 .
ဆိုင်ခွဲ ( ၄) J . Jue Beauty Saloon , ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက် ၊ ဗိုလ်ဗထူးလမ်း ၊ တာမွေ မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဆိုင်ခွဲ ( ၅ ) ချန်လုံး အလှပြင် သင်တန်းကျောင်း ၊
မော်တင် ( ၇) လမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဆိုင်ခွဲ ( ၆) နှင်းပွင့်လွှာ Beauty Spa , အမှတ်
( ၈၂ ) မြေညီထပ် ၊ လှည်းတန်းလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း -09 5141295 ,09 30245903
ဆိုင်ခွဲ ( ၇) Lavender Beauty Spa , အမှတ် ( ၄၄၇ ) ၊ ရတနာလမ်း ၊ တောင်ဥက္ကာပ မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
" မန္တလေးမြို့ တွင် ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်သော ဆိုင်ခွဲများ "
ဆိုင်ခွဲ ( ၁) ချန်လုံး Beauty Training School , ( ၇၇) လမ်း ( ၀င်းအတွင်း
) ၂၉ လမ်း နှင့် လမ်း ( ၃၀) ကြား ၊ မန္တလေးမြို့ ။ဖုန်း-09 43061427
" ပြင်ဦးလွင် မြို့ တွင် ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်သော ဆိုင်ခွဲများ "
ပင်မ ဆိုင်ခွဲ ( ၁) ဝေဟင်စတိုးဆိုင်ကြီး ၊ ရွှေစည်းခုံ ဘုရား အရှေ့ ဖက် ၊ သုမင်္ဂလာရပ် ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊
ဖုန်း -0920 44798 , 085 21086
" မုံရွာမြို့ တွင် ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်သော ဆိုင်ခွဲများ "
ပင်မဆိုင်ခွဲ ( ၁) အလိမ္မာစတိုးဆိုင်ကြီး ၊ ဖုန်း -071 21811
" ရမည်းသင်းမြို့ တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော ဆိုင်ခွဲ "
ဖုန်း - 064 40010
“ ကျွန်မ ရဲ့ ကျန်းမာ နုပျိုစေသော နည်းလမ်းကောင်း "
ကျွန်မ ကို ယခု လပိုင်း ကာလ အတွင်း ၊ " ဟယ် မဆု ပိန်သွားလိုက်တာ ဘယ်လို ၀ိတ်ချလိုက်တာလဲ ၊ အရမ်းပိန်သွားတယ်နော်."
ကိုယ်ရည် စစ်သွားတော့ မြန်မာ အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ရင် ပိုကြည့်ကောင်းလာတယ် "
စသဖြင့် ဝေဖန် အကြုံပြု စကားသံလေးများကို ကျွန်မ သွားလေရာ နေရာတိုင်းမှာသာမက ၊ ကျွန်မ ကို ချစ်ခင်သူ အများစု နေထိုင်ကြတဲ့ ဖေ့ဘုတ် ရပ်ကွက် အတွင်းမှာပါ comments လေးများမှတစ်ဆင့် သတိထားလာမိပါတယ်။
တကယ်တမ်းလည်း ကျွန်မ လုံးဝ မထင်မှတ်ထားဘဲ အဆီကျ ကျစ်လစ်ပြီး ပ်ိန်သွားတာ ရက်ပေါင်း (၄၀) အတွင်းမှာ ပေါင်ချိန် ( ၁၅၂ ) မှ သည် ( ၁၄၃ ) ပေါင်အထိ ရောက်လာသည် အထိပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ကျွန်မ ကိုယ်ခန္ဒာ အတွင်း ပိုင်း မှာ အရင်ကထက် ပိုမို ပေါ့ပါး လွတ်လပ်လာသလို ၊
အသား အရေ ကြည်လင် ၀င်းပ လာခြင်း ကို လည်း စတင်ခံစားနေရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ တစ်သက်တာမှာ ငွေကြေး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝ ခြင်းထက် ၊ စိတ်ဓာတ်ချမ်းသာ ပြည့်စုံခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန် မျှတခြင်းများကသာ အလို ရှိတိုင်း တောင့်တ နေကြသော ဘ၀တစ်ခုကို ဖန်တီး နိုင်ကြမှာပါ။
တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မ ဘ၀မှာ လူအများစု အားကျ ၊ အထင်ကြီးလောက်တဲ့ ငွေကြေး ဥစ္စာ ကြွယ်ဝမှုမရှိသလို ၊ စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင် ခြင်းဆိုတာ လည်း ၁၀၀ % မရှိခဲ့သူဆိုတာ ကိုယ် ကို တိုင် မှတစ်ပါး အခြားသော သူများကို လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေလို စိတ် မရှိသူမို့ ၊ ရံဖန် ရံခါ ဟန်ဆောင် အပြုံးများဖြင့်သာ လူတိုင်း အပေါ် စိတ်ရင်းစေတနာ မှန်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာ နေသယောင်ယောင် တုန့် ပြန်မှုများနဲ့ အလေးထား ဆက်ဆံပေးတတ်သူပါ။
ဒါက လည်း ကျွန်မ ဘ၀ ရဲ့ ကံ အကျိုးပေး အကြောင်းကြောင်းများကြောင့်သာ ဖြစ်ပြီး ဘ၀ အဆက်ဆက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော အကုသိုလ် ကံ အကျိုးဆက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
" လူဆိုသည်မှာ ဘယ်ဘ၀ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေပါစေ ၊ လက်ညှိုးညွှန်ရာ စေစားနိုင်တဲ့ ရှင်ဘုရင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ သုံး မကုန် ၊ ဖြုန်း မကုန်တဲ့ မဟာ သူဋ္ဌေးမင်းကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အရာရာ ကို သိစွမ်းနိုင်တဲ့ မဟာ ပညာကျော်ကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ လူသား ကောင်းကျိုး မသယ်ပိုး သေးသမျှ ဘုရားရှေ့ မှာတော့ သုည ပဲ "
ဆိုသည့် ဆရာ ဦးဘုန်း ( ဓာတု) ရဲ့ သုည အတွေးရသ စာစု လေး အတိုင်း ကျွန်မ သည် လူသားကောင်းကျိုးကို များစွာ မသယ်ပိုးနိုင်သေးသည့် တိုင်အောင် ၊ လူသားများရဲ့ ကျန်းမာ ချမ်းသာခြင်းကို လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှ နိုင်စေ ခြင်းဖြင့် သုည ဘ၀ မှ လွတ်ကင်း လိုသည့် စိတ်စေတနာ ကြောင့်လည်း ယခု ဆောင်းပါး ကို ရေးသားဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။
“ Uni City အစ ၊ စာသင်ကျောင်းက “
Uni City နဲ့ စတင်ပတ်သက်လာပုံ အကြောင်းကို ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ တွေးတောနေခဲ့တာ ( ၁ ) လ
နီးပါးကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီ အကြောင်းကို အရင်းစစ်ရရင်ဖြင့် ကျွန်မ ရဲ့ စာရိုက်ရတာကို ငြီးငွေ့ နေ တဲ့ ၊ အပျင်းဓာတ်ခံ စိတ်လေးကြောင့်ဖြစ်သလို ၊ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် မပြောင်းလဲသေးဘဲ သူတစ်ပါးကို ဝေမျှ ဖို့ ရာ စိတ်ထဲ မလုံ မလဲ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Uni City ကို ကျွန်မ ထိုင်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့
( ၂) နှစ်ကျော် က ကျောင်းသွားတက်နေစဉ် ကာလ ကတည်းက ၊ ထိုင်း သူငယ်ချင်းမလေးတွေ ကြား ရေပန်းစားပြောကြားနေတဲ့ စကားလုံးတွေ ကြောင့် စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။
နေ့ စဉ် စာသင်ခန်းထဲမှာ ရေသန့် ဗူးလေးတွေထဲ အစိမ်းရောင် အမှုန့် များကို ဖျော်ထည့်လာတတ်ကြပြီး ၊ တစ်နေကုန် ရေသန့် စက်က ရေကို ထ မသောက်ကြဘဲ ၊ သူတို့ ကိုယ်ပိုင် ရေဗူး စိမ်းလေးများ ကို သာ ရေဆာ တိုင်းမော့ သောက်နေကြတာ ကြောင့် ကျွန်မ စူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်းပြခဲ့တာပါ။ သူတို့ ကို မေးလိုက်တိုင်း " Uni City Chlorophyll powder " သောက်နေတာ လေ ဟူသော အဖြေ စကားသာ ပြန်ကြားခဲ့ကြပြီး Uni City ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်နိုင်ငံက ထုတ်တဲ့ ဆေးလဲ ဆိုတာ ပြောပြဖို့ကျွန်မ ဖက်က မေးခွန်း ထွက်မလာရင် ဖြေပေးဖို့ လည်း အဆင်သင့် မဖြစ်ကြသူများဆိုတာ ကျောင်းသားဘ၀ သင်ခန်းစာ များနဲ့ exam များနဲ့ နပန်းလုံးနေကြသူများ ပီပီ စာသင်ခန်း အတွင်း ၊ ကျွန်မ အလိုက်သိတတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ အခန်းဖော် ထိုင်းမလေး ကိုသာ ကျောင်းအားရက် တစ်နေ့ မှာ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် မေးကြည့်တဲ့အခါ သူမက “ ဆု နင်က အဆီပိုတွေ ရှိနေလို့ လား ၊
ဒီထက်ပို ပိန်ချင်သေးလို့ လား “ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အတူ
“ နင့်ရဲ့ အရပ် ( ၅) ပေ ၊ ( ၈) လက်မ မှာ ၊ ပေါင်ချိန်က ( ၁၃၅ ) ၀န်းကျင်လေ
တော်ပြီပေါ့ ဒီ လောက်ဆို ထပ်မပိန်ချင်နဲ့ တော့နော် “ ဆိုပြီး စေတနာ စကားနဲ့ ဖျောင့်ဖျ ရင်း
Uni City ဆိုတာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ထုတ်ဆေးဝါး ဖြစ်ပြီး ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ Network Marketing system နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း သူမက ကျွန်မကို စတင် ပြောပြခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် system & plan book , Movie file များကိုလည်း သူမရဲ့ laptop လေးနဲ့ ကျွန်မ ကို
စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရှင်းပြ ခဲ့ပါသေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ခေါင်းထဲမှာ Network Marketing လို့ သိလိုက်တာ နဲ့ Uni City ဆိုတာ ကြီးကို စိတ်ဝင်စားဖို့ လမ်းစ ကို အလျင်အမြန် ဖြတ်ချ ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မ တို့ မြန်မာပြည်မှာ Network Marketing အများစုဟာ လူလိမ် ၊ လူညာ များ အုပ်စုဖွဲ့ ထားတတ်ခြင်း ၊ သူတစ်ပါး ချွေးနည်းစာ ငွေကြေးများကို စကားလုံး လှလှလေးများ အောက်မှာ ဖဲ့ခြွေ ယူသွားတတ်ခြင်းများကို ၊ ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့နာမည်ကြီး company များမှာ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရဖူးတာကြောင့် ပါပဲ။
ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ် မို့ network marketing လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့၊ ကျွန်မ လုံးလုံး အထင်မကြီးတော့ပါ။
ကျွန်မရဲ့ အခန်းဖော် ယပလက်မလေး လည်း အာပေါက်အောင် ပြောပြခဲ့ရတဲ့ သူမနဲ့ ကျွန်မရဲ့ နှစ်ကိုယ်တော် ရှင်းလင်းပွဲ အပြီးမှာတော့
“ ဆု နင် တကယ် စိတ်ဝင်စားရင် ငါ့ရဲ့ down line member အဖြစ် လုပ်ပေးလိုက် ရမလား ၊ နင့်နိုင်ငံကို ပြန်သွားရင် တစ်ခြားသူတွေကို ရှင်းပြ နိုင်အောင် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ပေးလိုက်မယ်လေ “ ဆိုတဲ့ စကားသံ အဆုံးမှာတော့ ကျွန်မရဲ့ အဖြေက
" No, thanks ka " လို့ ပဲ ယဉ်ကျေးစွာ တုန့် ပြန်ခဲ့လိုက်မိပါတယ်။
“ တစ်ကျော့ပြန် Uni City ဖြင့် ထိတ်တိုက်တိုးမိခြင်း “
ကျွန်မကို Uni City နဲ့ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် ၀န်းကျင်ကာလမှာ ၊ ထပ်မံ မိတ်ဆက်ပေးလာဖို့ အကြောင်းဖန်လာသူက တစ်ချိန်က စူပါမော်ဒယ်လ်တစ်ဦးလည်းဖြစ် ၊ ယခုအခါ ယောဂ ဆရာမ တစ်ဦးနှင့် ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်လာတဲ့ မနန်းဆု ကေဆွမ် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မဆွမ်နဲ့ ကျွန်မက စိတ်ဓာတ်အားဖြင့် သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်တတ်တာ များတတ်ပြီး ၊ ဘ၀မှာ ကောင်းမွန်သော စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဘာသာရေးပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်နေကြသူများ ဖြစ်ပါလျှက် အတိုက်အခိုက် များကို အချိန်များစွာ ခါးစည်း ခံရပုံ ခြင်း လည်း တူညီနေတတ်တာကြောင့် သူမ ကို ကျွန်မ အလွန်ချစ်ခင် တွယ်တာ မိပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်စိတ်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ လူအားဖြင့်သော် လည်းကောင်း ပံ့ပိုးကူညီတတ်ကြပြီး ၊ သူမ ဘာလုပ်လုပ် ကျွန်မ ကို အသိပေးဝေမျှ တတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုထဲမှာ အစ်မ မရှိခဲ့တဲ့ကျွန်မ အတွက် မဆွမ်ဟာ ကျွန်မ ရဲ့ အစ်မ တစ်ဦးကဲ့သို့ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက်လည်း ဖြစ်ခဲ့သူပါ။ မဆွမ်က တစ်ရက်မှာ သူမရဲ့ လှပတဲ့ အသားအရေ နဲ့ ခန္ဒာကိုယ်မှ ကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းပုံ အကြောင်းကို ပြောပြပြီး ၊ သူမရဲ့ မိတ်ဆွေ အချို့ ကျင်းပတဲ့ ကျန်းမာရေး ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုရှိရာ ၊ တော်ဝင်စင်တာ ကို ခေါ်သွားခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ပွဲလို့ သာ ခမ်းခမ်းနားနား ဆိုရပေမယ့် မြန်မာလူမျိုး ၃ ဦး ၊ ထိုင်း လူမျိုး ၂ ဦး သာ ရှိတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်းငယ် လေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းဘာသာ စကားကျွမ်းကျင်တဲ့ မဆွမ်က ထိုင်းအမျိုးသမီး တစ်ဦးနဲ့ ကျွန်မ ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေကို သူမရဲ့ စကားပြန် အကူအညီနဲ့ ကျွန်မ နားလည် သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မှာသာ ၊ ပညာသင်ကြားခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အားနည်းချက်က ထိုင်းဘာသာ စကားကို
ရေရေ လည်လည် မပြောတတ်ခြင်းပါပဲ။ ထိုင်းအမျိုးသမီးက စိတ်ရှည် လက်ရှည် နဲ့ အချိန် ( ၂) နာရီ နီးပါး သေချာ ရှင်းပြ ခဲ့သလို ၊ Network Marketing Business အကြောင်းကိုပါ တစ်ဆက်တည်းပြောလာရင်း ကျွန်မ သိရှိခဲ့ဖူး ပြီးသား Uni City Products အကြောင်းသာ ဖြစ်နေပြန်တာကြောင့် ခေါင်းကြော မာတဲ့ ကျွန်မ ၊ ကျန်းမာရေး အသိပဲ အရယူခဲ့ပြီး business plan အဖြစ် ကနဦး စတင်ရင်းနှီးရမယ့် ငွေကျပ် ( ၁၀ ) သိန်း ကို မရင်းနှီးနိုင်ခဲ့တဲ့ အနေအထားကြောင့် ၊ ဒုတိယ အကြိမ် တပ်ခေါက် ပြန်ခဲ့လိုက်မိပါတယ်။
“ မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်လာပြန်တဲ့ တတိယပြန် Uni City “
တစ်နှစ်တိတိ ကြာအပြီး ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ အတွင်းမှာပဲ Uni City ဟာ ကျွန်မ ဘ၀ ထဲကို နောက်တစ်ကြိမ် ဇွဲ မလျော့ဘဲ ထပ်မံ ၀င်တိုးလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်မ
Up Line ညီမလေး စုမြတ်အောင် ( Silk & Style) ရဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းတွေက စွမ်း လို့ လား ၊ကျွန်မကပဲ Uni city ရဲ့ ဇွဲ ကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာကြောင့်လား မရေ မသေချာပေမယ့် ကျွန်မ ရဲ့ ဘ၀ ထဲ လာခြင်းကောင်းသော Uni City အဖြစ် ယခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ လက်ခံခဲ့လိုက် မိပါတယ်။
Uni City ရဲ့ Member ၀င်တစ်ယောက် အဖြစ် စတင် ခံယူလိုက်တဲ့ နေ့ မှာပဲ ညီမလေး စုမြတ် ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ငွေကျပ် ( ၁၀ ) သိန်းဝန်းကျင် အရင်းအနှီးတစ်ခုနဲ့ ကျွန်မ ဟာနေ့ ချင်း ၊ ညချင်း P.V 500 ပိုင်ရှင် V.I.P Member တစ်ဦး အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
တစ်ကယ်တမ်းတော့ ပုဂိုလ် ခင်လို့ ၊ တရားမင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ကျွန်မ Uni City V.I.P Member ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့် ဘယ်ဆေးက စပြီး သောက်ရလို့ ဘယ်ဆေးတွေ သုံးရမယ်မှန်းတော့
ရေရေ ရာရာ မသိခဲ့လိုက်ပါဘူး။
အဆီကျ ပိန်ချင်လို့ သောက်ရမယ့် Slimming set ထဲက ဆေးအုပ်စုမှာ ပင် ၊ အမျိုးအစားက ( ၇) မျိုး နဲ့ ပိန်ဆေးတွေ မသောက်ခင် ခန္ဒာကိုယ် သန့် ရှင်းရေး အုပ်စု ဆေးတွေက ( ၄) မျိုး ၊ စုစုပေါင်း
ဆေး( ၁၁ ) မျိုးဟာ ကျွန်မရဲ့ မျက်စိကို ကလည် ရိုက်စေရုံသာမက ၊ ခေါင်းထဲမှာပါ ချာ လပတ်လည်ကုန်သည်အထိ စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ စိတ်တစ်ခုက အသိပညာ တစ်ခုကို ကိုယ်တိုင် ကျကျနန မသိသေးဘဲ တစ်ပါးသူ အပေါ် ယောင်ဝါးဝါးနဲ့ ဝေမျှ လိုစိတ်မရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက်ကြောင့် P.V 500 V.I.P Member ဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင် ၊ down lines ရအောင် ရှာဖွေဖို့ စိတ်မ၀င်စားခဲ့သေးသလို ၊ တစ်ခြားသူတွေ ဆေးသောက်ဖြစ် အောင် ၊ ဆေးဝယ်လာအောင် နည်းလမ်းတကျပြောပြ ပေးနိုင်ဖို့ လည်း ဘာတစ်ခုမှ မသိခဲ့တာကြောင့် Uni City ဆေးတွေကို ကျွန်မ စတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ခန္ဒာကိုယ်သန့် ရှင်းရေး အုပ်စု ( ၄) မျိုး ဖြစ်တဲ့ Nature Tea ( အူသန့် ရှင်းရေး) , Chlorophyll Powder ( သွေးသန့် ရှင်းရေး) , Native Lgnd Tea( သွေးဝါအိတ်သန့် ရှင်းရေး) , Red Clover
( အသဲ သန့် ရှင်းရေး) ဆေးတွေ အကြောင်း ကို တိတိကျကျ လေ့လာဖြစ်တဲ့ အခါ ဘာကြောင့် ကိုယ်ခန္ဒာသန့် ရှင်းရေး အတွက် ဒီဆေး ( ၄) မျိုးကို စတင် အသုံးပြုရသလဲဆိုတာ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ( ၂) ပတ်ပြည့်အောင် သောက်သုံးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သိရှိလာခဲ့ပါတယ်။
“ Cleansing Set ကို တစ်နှစ်လျှင် ( ၂) ကြိမ်သာ အသုံးပြုသင့်သည်မှာ "
Uni City Cleansing Set ( ၄ ) မျိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်း၊ အပြင်ပိုင်း ကြည်လင်အောင် မှီဝဲ သုံးဆောင်ရတဲ့ ဓါတ်စာများ ဖြစ်ပြီး ကျွန်မ ဟာတစ်ချိန်က ၊ GYM ကစားခြင်း ၊ ရေကူးခြင်း ၊ ယောဂလေ့ကျင့် ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း နောက်ပိုင်း ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းသဘောတရားကို နားလည်လာတာ ကြောင့် ပြင်ပ ရုပ် ခန္ဒာ နဲ့ အတွင်း စိတ် ခန္ဒာ ကိုပြုပြင်နည်းများ အတွက် အချိန်ပေးဂရုစိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေဟာ ကျွန်မရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို သိသိသာသာ တိုးတက် ပြောင်းလဲ စေခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပြီး
ဓါတ်စာ ( Dietary Supplement ) နှင့် အသားအရေကြည်လင်ကျန်းမာအောင် နည်းမှန်လမ်းမှန် ဂရုစိုက်ပေးခြင်းကသာ ၊ ရုပ်ပိုင်း ခန္ဒာ အလှ ကို ပိုမို သိသာစွာ ထိရောက်စေပါတယ်။ ဆေးလိုအာနိသင်ရှိတဲ့ Herbal NATURE’S Tea ကို ည အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း
( ၂) ပတ်ကြာအောင် ၊ ဆေးဘက်ဝင်သောက်သုံးခြင်းသည် အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနည်းလမ်းတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာ လှပ ၊ အဆီပို ကင်းဝေးလိုသူတိုင်း ၊ ကိုယ်ခန္ဒာ သန့် ရှင်းရေးကို ၊ နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သလို သောက်သုံးရ မယ့် ဓါတ်စာများကို လည်း မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲနည်း နားလည်ရပါမယ်။
ဒီ အချက်အလက်တွေကို မနန်းဆုကေဆွမ်က ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် အဖြစ်ရေးသားခဲ့ဖူးသလို ၊ ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့ လေ့လာ ခြင်းကြောင့်လည်း နည်းလမ်း မှန်ကန်တဲ့ ဓာတ်စာများ ရဲ့ သဘော သဘာဝ ကို ပိုမို သိရှိလာခဲ့ပါတယ် ။
ကျန်းမာ လှပ လိုသူတိုင်း သောက်သုံးရမယ့် ဓာတ်စာများဟာ သွေးစစ်ခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းတွင် တိုးတက်မှုကို အာမခံနိုင်တဲ့ ဓါတ်စာဖြစ်ရပါမယ်။ မသောက်ခင် သွေးစစ်ခြင်း၊ LAB ဖြင့် HbA1C နှင့် Lipid Profile စစ်ဆေးပြုလုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းရှိ အူလမ်းကြောင်း ( Nature’s Tea ) အသည်း ( Red Clover ) ၊ ကျောက်ကပ်၊ သွေးသန့်စင်အောင် ( Lgnd Tea & Chlorophyll Powder ) အစရှိတဲ့ Cleaning Detox အဆင့်ဆင့်ကို တစ် နှစ်လျှင် ( ၂) ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ HbA1C နှင့် Lipid Profile စစ်ဆေးပြီးနောက် အဆီကျ ပိန်လိုသူများ ဖြစ်စေ ၊ အသားအရေ လှပ ကြည်လင်စေလို ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ၊ “ Uni City Slimming Set & Cleopatra Set “ ဓါတ်စာများ ကို ( ၃) လ အတွင်း သောက်သုံးနိုင်ကြပါတယ်။
“ Uni City Slimming Set & Cleopatra Set ဆိုတာ ဘာဓာတ်စာတွေလဲ “
အဆီကျ လှပ ၊ ပိန်စေသူအတွက် ဓါတ်စာ Uni City Slimming Set ( Bios Life SX , Bios Life C , Bios Life E , Chitorich , Equalan ) နှင့် ကျန်းမာ လှပ စိုပြေလိုသူ များ Cleopatra Set အတွက် ဓါတ်စာ များကို ရွေးချယ်သောက်သုံးပြီး (၃) လ လောက်သုံးစွဲပြီးတာနဲ့သွေးနောက်တကြိမ်စစ်ဆေးပေးစေလိုပါတယ်။ အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သော ဓါတ်စာဆိုလျှင်( ၃ ) လ အတွင်းသွေးထဲမှ LDL ကျဆင်းစေပြီး HDL တိုးတက်စေပါတယ်။ သွေးထဲမှ အဆီဓါတ်နှင့် သကြားဓါတ်ကို မျှတကောင်းမွန်လာစေသလို ကျန်းမာ လှပ အဆီပို ကင်းဝေးသော ကိုယ်ခန္ဒာကို လည်း ဓာတ်စာများကြောင့် ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
"အဆီကျလိုသူတိုင်း ၊ ကျန်းမာ လှပလိုသူတိုင်း ၊ပထမဦးဆုံး စတင်သုံးရမှာက" Uni City Cleansing set(၄)မျိုး ပါ "
1. Nature's Tea ( အူသန့် ရှင်းရေး) ,
2. Red clover( အသဲသန့် ရှင်းရေး) ,
3. Leng Tea (သွေးဝါအိတ်သန့် ရှင်းရေး)
4. Chlorophyll powder ( သွေးသန့် ရှင်းရေး)
( ဆုရဲ့ Uni City Album ထဲမှာ ဓာတ်ပုံများနဲ့ ဆေး အာနိသင်များကို အသေးစိတ် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်နော် )
" ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ အဆီကျလိုသူတွေ သုံးရမှာက " Uni City Slimming set ( ၅) မျိုး "
1.Bios Life SX ( 60 PKT) for2months course. လိမ္မော် အရသာ
2. Bios Life C ( 60 PKT) for2months course . Green Tea အရသာ
3. Bios Life E ( 30 PKT ) for one month course . ပန်းသီးစိမ်း အရသာ
4. Chito Rich ( Capsule 180 )
5. Equalan ( Capsule 240)
တွေပါပဲ။ ဒီ ဓာတ်စာတွေ ထဲက အနည်းဆုံး ( ၂) မျိုးကနေ ၊ ( ၃) မျိုး အထိ ရွေးချယ်ပြီး နေ့ စဉ် ထမင်း မစားခင်
( ၁၅ ) မိနစ် အလိုမှာ သောက်သုံးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အချိုးအစား အတွက် အနည်းဆုံး ( ၃) လ အချိန်ယူ သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ စိတ်ပါလို့ ထ သောက်လိုက် ၊ နောက်နေ့ မအားလို့ ဆေး သောက်ဖို့ ပျက်ကွက် လိုက်ဆိုရင်တော့ အဆီကျ လှပဖို့ ဝေးသထက် ၊ ဝေးလာမှာ အသေအချာပါ နော်.။
“ ဘာကြောင့် ကိုယ်ခန္ဒာတွင်း သကြားဓာတ်ကို မျှတ ကောင်းမွန်စေသင့်သလဲ”
အရိုးရှင်းဆုံး အဖြေကတေှာ့ သကြားဓါတ် များပြားလာခြင်း သည်လူကို ပိုမို အိုမင်း ၊ ရင့်ရော်စေသလို ၊ ဆီးချို ၊ သွေးချို သမားများ ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရန်သူ တော်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါ။ အထက်ပါ နည်းများ အတိုင်း ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ကုန် ပိုင်း အတွင်းမှ စတင်ပြီးကိုယ်ခန္ဒာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဓာတ်စာများကို သေသေချာချာ ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်ပေးခြင်းကြောင့် ယခု ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသားနေသည့် အချိန်ကာလ ရက်ပေါင်း ( ၄၀ ) ကာ လအတွင်း ကျွန်မရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ကြည်လင်တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားသည်သာမက ၊ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်းရှိ အဆီပိုများမှာလည်း ( ၁၀) ပေါင်နီးပါး ကျဆင်းသွားသည်ကို အားလုံး သတိပြုမိနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ဘ၀ တစ်သက်တာ ကျန်းမာရေး နည်းလမ်းကောင်းများကို Uni City ဓာတ်စာများကြောင့် ရရှိခဲ့ခြင်း အပေါ် များစွာ ကျေနပ်နေမိပါတော့တယ်ရှင်။
“ Uni City ရဲ့ Happy Life Project ဆိုတာ ဘာလဲ “
ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့ ကျန်းမာ ရေး အသိ နဲ့ ရလာဒ် ကောင်းများကို Uni City ဓာတ်စာများနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ တစ်သက်စာ ယုံကြည်သွားခဲ့ပေမယ့်လည်း ၊ မည့်သည့် Network Marketing Business ကိုမှ မယုံကြည်တတ် ၊ အထင်မကြီးတတ်ခဲ့ တဲ့ ကျွန်မဟာ ၊ Uni City ရဲ့ Network Business Plan ကို လည်း အလွယ်တကူ အားမပေးသေး ၊ အဆုံးစွန်အထိ မယုံကြည်သေးပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် မည်သည့် Down Lines များကိုမျှ ၊ ကာယကံရှင်များရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု မပါရှိဘဲ ဖိအားပေးပြီး ရှာဖွေ ဖို့ ရာ ယနေ့ တိုင် ဆန္ဒ မရှိလာ ခဲ့သေးပါ။ လက်ရှိ ကျွန်မရဲ့ down lines အနည်းငယ်ဟာ ၊ ကျွန်မရဲ့ ပြောင်းလဲလာမှု အပေါ် လက်တွေ့မြင်ပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားစွာ စတင် ဆက်သွယ်လာသူများသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မ အပေါ် စေတနာကောင်းတဲ့ Up Lines များရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု ကောင်းများကို ကျွန်မ မပေးစွမ်းနိုင်သေးပါ။
( တကယ့်ကို ဆောရီးပါ ညီမလေး စုမြတ် ၊ Yankee @ အေးမြင့်မိုရ် ၊ မမိစိမ်း တို့ ရေ :P )
Uni City ဓာတ်စာများဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် ၁၀၀ % ကောင်းမွန်လာတာ ကို ကျွန်မ ကိုယ်တွေ့ အသိ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၊ Network Marketing Business မှာ ပါဝင်လာကြသူများ အတွက် ၊ ကံတရားနဲ့ အပြောင်းအလဲ များစွာကို မည်သူမှ တပ်အပ် မမြင်နိုင် ၊ မပြော ၊ မဟောနိုင်ကြပါ။
တစ်ချို့ ညီမလေး ၊ မောင်လေး များ ၊ အစ်ကိုကြီး ၊ အစ်မ ကြီးများက ရက်ပေါင်း( ၄၀) အတွင်း ၊ ကျွန်မ ရဲ့ ပြောင်းလဲ ထူးခြားလာမှုကိုစိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းကြရင်း Business plan ကိုလည်း ပြောပြပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတတ်သူများ ပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့် ကျွန်မ တတ်ကျွမ်း နားလည်သလောက်ပြောပြပေးနေဆဲပါ ၊
သို့ သော် Uni City Network Marketing Business မှာ ၊ ငွေကျပ် ( ၁၀ ) သိန်းကျော်စတင် ရင်းနှီးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်
သူတို့ ရဲ့ Up lines ဖြစ်လာမယ့် ကျွန်မကို
“ Uni City Company က မလိမ်ပါဘူးလို့ မဆု အာမခံလား ?
“ ကျွန်တော် ကျွန်မ တို့ ဆေးတွေ ( ၁၀) သိန်းကျော် ၀ယ်ပြီး customers ပေါ် မလာရင် ၊ ငွေ တွေ ပလုံသွားမှာလား ? “
“ ကျွန်မတို့ ( ၁၀) သိန်းရင်းပြီး ရလာမယ့် Bonus တွေကို uni city company က ၊ လစဉ် မှန်မှန် ပေးပါ့မယ်လို့ မဆု အတတ်ပြောနိုင်ပါသလား “
“ တကယ်လို့ တစ်ခုခု မှားယွင်းခဲ့ရင် ၊ မဆု ဒီဆေးတွေ အကုန်ပြန်ရောင်းပေးပြီး ငွေ ( ၁၀) သိန်းပြန်ပေါ် အောင် လုပ်ပေးမှာလား?
" Down Line Member ၅ ယောက်ပြည့်တာနဲ့ ကိုယ် ရင်းနှီးထားတဲ့ ငွေ ကျပ် ( ၁၀ ) သိန်းက ၊ အရင်းကြေတဲ့အပြင် ၊ Bonus အမြတ်ထွက်ကာ ဆေးများလည်း ၀ယ်စရာမလိုဘဲ ၊ ထပ်မံ ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ တကယ်သေချာလား "
အစ ရှိတဲ့ လားပေါင်းများစွာသော မေးခွန်းတွေ အောက်မှာ ခေါင်းမရှောင်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ဟာ အားလုံး အတွက် တိကျ သေချာတဲ့ အဖြေတစ်ခု ကိုသာ မေးလာတိုင်းမှာ ပေးနေမိဆဲပါ ။
“ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်ရှိကြမယ့် Business ဆိုတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားကြသူတိုင်းဟာ အသက်( ၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး သူများသာဖြစ်ကြ လို့ စဉ်းစား ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ ၊ ညာဏ် ရည် ညာဏ်သွေး ကောင်းမွန်သူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သာ မိမိ ဘ၀ ကို ရပ်တည်ကြပါ ၊ ကျွန်မ ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ ၊
နီးစပ်ရာ up lines များရဲ့ စည်းရုံးရေး ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ဘုမသိ ဘမသိဘဲနဲ့မည်သည့် Network Marketing Business ကိုမှ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့ ၊
အရာရာကို ယုံကြည်မှု လွယ်လွယ် မပေး တတ်တဲ့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလုပ်ငန်းမှာ ငွေကြေး ( ၁၀ ) သိန်းကျော်စတင်ရင်းနှီးပြီး ၊
ကျန်းမာ သန့် စင်သော ခန္ဒာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင် ရရှိနေခဲ့ပါပြီ။
ဒီအတွက် Uni City Company ကြီးက တစ်ချိ်န် ချိန်မှာ ၊ မမှန် မကန် လုပ်ခဲ့လေဦးတော့ ၊
ကျွန်မ အတွက် အမြတ်ထွက်နေတာကတော့ ကျန်းမာ ၊ ချမ်းသာသောဘ၀ တစ်ခုကို ဓာတ်စာကောင်းများ သောက်သုံးပြီး ရယူနိုင်ခဲ့သလို ၊ လူမှုဘ၀ မှာလည်း နိုင်ငံပေါင်း ( ၃၀) ကျော်က ၊ အခြားသော Uni City Business Partners များနဲ့ ရင်းနှီး ခင်မင်ခွင့်များ ရရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျွန်မ ကို ချစ်ခင် ယုံကြည်ကြသော down lines members များအတွက်လည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာသော
ဘ၀တစ်ခု ကို Happy Life Project အစွမ်းဖြင့် ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဆက်လက်ပြီးတော့ လည်း လူသား အားလုံး အတွက် စိတ်ကျန်းမာ၊ ကုိုယ်ချမ်းသာသော ဘ၀များစွာကို Uni City အခြေခံ ဓာတ်စာကောင်းများ ဖြင့် ပေးစွမ်းခွင့် ရချင်ပါသေးတယ်။
သို့ သော်လည်း မည်သူ့ ကိုမှ တွန်းအားပေးပြီး member ၀င်ဖို့ ၊ ဆေးနဲ့ ဓာတ်စာများ ၀ယ်ယူဖို့ တိုက်တွန်း မှာ မဟုတ်သလို ၊ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားကာ P.V 500 , V.I.P Member အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာသူတိုင်းကို တော့ ကျန်းမာ ချမ်းသာသော ဘ၀တစ်ခုဆီသို့ ၊ လက်တွဲခေါ် ကာ လမ်းပြ ပေးဖို့ ကျွန်မ ဆုကဗျာ အသင့်ရှိနေမှာပါ။
Uni City နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၊ ဓာတ်စာများကို မှီဝဲ လိုသူတိုင်း သာမက ၊ Happy Life Project Business Plan ကို စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်း ကျွန်မ ကို ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် ဖုန်း- 09 5412932 သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ ဘ၀ရဲ့ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ခြင်းများက သင့်ရဲ့ လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိနေတာပါ။
သင်အရ လှမ်းယူနိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့ လက်အချိန်အဆ နဲ့ ညာဏ် ရည် ညာဏ်သွေး အပေါ် မှာ သာ အပြည့်အ၀ မူတည်ပါတယ်။
သင့် ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစ နဲ့ အချိန်တို အတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုကို အရလှမ်းယူနိုင်ပါစေ လို့ ကျွန်မ ရင်မှ မေတ္တာဖြင့် နွေးထွေးစွာ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။
" Uni City ချစ်သူများ အားလုံး ကိုယ်စား "
၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃)ရက်
Uni City Team Work seminar တစ်ခုမှ ပုံရိပ်များ
Uni City Up lines & Down Lines Meeting
Uni City Slimming set အစွမ်းပါ။
Uni City ဆေးနှင့် ဓာတ်စာများ
ဒီဓာတ်ပုံလေး ကိုကြည့်ပြီး စာဖတ်သူများ ခံစားမှုတစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ကြဘူးဆိုရင်တော့ အောက်က စာတွေကို ဆက်ဖတ်ဖို့ မလိုအပ်တော့တဲ့ အကြောင်း အရင်ဦးဆုံး မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေက M.R.T.V4Chit Chit Program မှာ အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့်သွားခဲ့တဲ့ ကျွန်မ နဲ့ Wamiles ( Japan) skin care မှ Beautician ညီမလေး စိုးစံသူ ၊ Presenter ညီမလေး ဖြိုးမေစံ တို့ ရဲ့တွေဆုံဆွေးနွေးခန်း ကို စိတ်ဝင်တစား ရှိကြသူများရဲ့ မေးမြန်းလာတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကြောင့် ဒီဆောင်းပါးလေး ကိုရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
အများစု မသိခဲ့ ကြတဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ မျက်နှာလေး မှာတစ်ချိန်က နေ့ စဉ်သောကပေးနေတဲ့ ၀က်ခြံဆိုးတွေ ကြောင့် အချိန်နဲ့ အမျှ ပူပင်သောက ရောက်ခဲ့ရတာပါ။ မီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ ကလည်း အရမ်းများ ၊ ပွဲတိုင်းကလည်း နေ့ စဉ်ဖိတ်ကြားခြင်းခံနေရချိန်မို့ကျွန်မ မှာ ၀က်ခြံတွေကို လူမမြင်အောင် သနပ်ခါးထူထူ လိမ်းပြီး ဖုံးရ ဖိရနဲ့ကိုယ့်ကို ကိုယ် လည်း ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့ လွန်းခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကိုလည်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသူပါ။
ဘယ်သွားသွား ၊ ဘာဝတ်ဝတ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရုပ်ဆိုးမှန်း သိနေချိန်မို့ လူတောထဲ သွားရမှာတောင် ကျွန်မ မှာ မ၀ံ့ မရဲ နဲ့ အချိန်တိုင်း ထိတ်လန့် နေခဲ့ရတာပါ ။
အခု လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကျွန်မ မျက်နှာလေး ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Wamiles ( Japan) Skin care ၊ Exfoliation နည်းပညာ ဖြင့်ကုသ မှုကြောင့် “၀က်ခြံဆို တာ ချို ( ဂျို) နဲ့ လားကွယ် ၊ ဘယ်အချိန်ချိန်လာလာ ၊ မကြောက်ဘူးကွယ်” လို့ တောင် စာသားလေးပြောင်းရေး ချင်မိပါရဲ့ရှင်။
ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတွေ ဘယ်လို ပျောက်ကင်းသွားလဲဆိုတာ စာဖတ်သူများ မသိရသေးခင် ၀က်ခြံ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာ ကို အရင်လေ့လာခဲ့မိပါတယ်။
“ ၀က်ခြံ ၏ သဘာဝတရား “
၀က်ခြံ အဓိက ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် မွေးညှင်းပေါက်လေးများ ပိတ်ဆို့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ အဆီအိတ်ဂလင်း များမှ ထုတ်လိုက်သော အဆီလေးများသည် ပုံမှန်အခြေအနေတွင် အရေပြားမျက်နှာပြင် (Skin Surface) ပေါ်သို့ ထွက်လာလေ့ရှိပါသည် ။
ထိုအချိန်တွင်အဆီပြွှန် ပိတ်နေပါက ထွက်ပေါက်ပိတ်သွားပြီးနောက် ဘတ်တီးရီးယားများ စတင်ပွားများလာနိုင်ပါသည် ။ ထိုမှ တစ်ဆင့် ၀က်ခြံများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၀က်ခြံအဖြစ်များသောနေရာများမှာ မျက်နှာ ၊ ရင်ဘတ် ၊ကျော ၊ပုခုံး နှင့် လက်ပြင်တို့ ဖြစ်သည် ။
အပျိုဖော်ဝင်စနှင့် လူပျိုဖော်ဝင်စ အချိန်များတွင် သာမန်ထက်လွန်ကဲသော ဟော်မုန်းများဧ။် လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ၀က်ခြံဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါသည် ။ ထိုလှုံ့ဆော်မှုသည် လူအများစုအတွက် အချိန်နှင့်အလိုက်လျှော့နည်းပြီးနောက် ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည် ။
ထို့ကြောင့် ၀က်ခြံသည် အချို့လူများတွင် အသက်နှစ်ဆယ် ကျော်ချိန်တွင်စတင်၍ပျောက်ကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျော့နည်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ကျွန်မလေ့လာမှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
(၁) ဟော်မုန်းလှုပ်ရှားမှု ရှိခြင်း ၊ ဥပမာအားဖြင့် အပျိုဖော်ဝင်စ နှင့်လူပျိုဖော်ဝင်စအချိန် နှင့် မိန်းကလေးများရာသီလာချိန် (၂) စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း ၊ ဟော်မုန်းဓာတ်များခြင်း (၃) အဆီ ဂလင်းများလွန်ကဲစွာအလုပ်လုပ်ခြင်း (၄) ဆဲလ်သေများ စုပုံလာခြင်း (၅) ချွေးပေါက်ထဲရှိ ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင် Allergy ဖြစ်လာခြင်း (၆) အရေပြားကျိန်းစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နေရာရာသို့ ကုတ်မိ၍ ရောင်ရမ်းခြင်း (၇) ကြွက်သား ကြီးထွားစေသော ဆေးများ အသုံးပြုခြင်း (၈) Halogens (iodides, chlorides, bromides)lithium, barbiturates, androgen s အစရှိသည်များ ပါဝင်သောဆေးဝါးများ အသုံးပြုခြငး (၉) Chlorine compound များစွာနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခြင်း ၊ထို compound ထဲတွင် အထူးသဖြင့် Chlorinated dioxins သည်ဆိုးဝါးသော ၀က်ခြံ၊ ကာလကြာရှည်စွာ မပျောက်သော ၀က်ခြံများအားဖြစ်ပေါ်စေသည် ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း ကျွန်မလေ့လာခဲ့ဖူးပါတယ်။
“ ၀က်ခြံ ဖြစ်တတ်သည့် မျက်နှာလေး များ အတွက် သိထားသင့်သည်များမှာ “
၁။ နေ့ စဉ် မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ chemicalအရမ်းပြင်းထန်တဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့မသစ်မိကြဖို့ပါပဲနော်။ မျက်နှာအသားအရည်က အင်မတန်နူးညံ့ တဲ့နေရာမို့ ဆပ်ပြာပြင်းလွန်းအားကြီးရင် မျက်နှာအသားအရည်ပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်မှာ တစ်နေ့ကိုအိပ်ချိန် (၈) နာရီတော့ပြည့်ဝအောင် အိပ်ဖို့လိုပါတယ်။
၃။ ရေသောက်ခြင်း ကလည်းအသားအရည်လှဖို့ ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကနေပါဝင်ပါတယ်။
ရေများများ သောက်ရင်အသားအရည်က ကြည်လင်ပြီးလှပစေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ရေကိုလည်းများများသောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဓိကကတော့ မနက် အိပ်ရာ နိုးချိန် ရေတစ်ခွက်ကို တစ်ဝကြီးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
၄။. မျက်နှာအလှ အပအတွက် ၀မ်းမှန်ဖို့ကလည်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်လို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာအသားအရည်က ခြောက်သွေ့ နေသလိုဖြစ်ပါတယ်။
5. အဆီပြန်တဲ့ သူများအနေနဲ့လည်းဒိန်ချဉ်နဲ့လည်းမျက်နှာကိုပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်။
ဒိန်ချဉ်က လည်းမျက်နှာမှာရှိတဲ့ အဆီတွေကိုစုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
“ ကျွန်မရဲ့ နေ့စဉ် မျက်နှာသစ်နည်း လျှို့ ဝှက်ချက် “
ကျွန်မကတော့ ၀က်ခြံပျောက်တဲ့ Wamiles Ioune Soap ( အမဲတုံး ဆပ်ပြာ) နဲ့ ပဲ နေ့ စဉ် မျက်နှာ သစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီဆပ်ပြာတုံးလေး ကို မသုံးခင်ကာလက ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ ဆပ်ပြာတုံး ပုံစံလေး ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲက ကြိတ်အထင်သေးမိခဲ့တာကို ၀န်ခံပါရစေ။
မဲမဲ သဲသဲ ဆပ်ပြာတုံး ပိစိလေးက ငါ့မျက်နှာက ၀က်ခြံတွေပျောက်အောင် ဘယ်လိုများ ကုသပေးနိုင်ပါ့မလဲ လို့ တွေးရင်းမ၀ံ့ မရဲ အသုံးပြုလာချိန် ဆပ်ပြာ တစ်တုံး မကုန်ခင်မှာပဲ ကျွန်မ မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတွေသာ မက ၊ အမာရွတ် အမည်းတွေကို ပါ အဖတ်လိုက် ကွာကျအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ကျွန်မ က ၊အမဲတုံး တန်ခိုးရှင် လေး လို့ကင်ပွန်းတပ်ပေးထားပါတယ် ။
ယခု အချိန်အထိလည်း တစ်ခါတစ်လေ ၀ယ်ရခက်တဲ့ အမဲတုံး ဆပ်ပြာလေး ကို တစ်ရှိုက်မက်မက် သုံးနေဆဲပါပဲ ။ ဒီ ဆပ်ပြာမဲလေး နဲ့ မျက်နှာသစ်မှ ကျွန်မ မျက်နှာလေး ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိတယ်လို့ ခံစားမိတာကြောင့်ပါ။
အပြင် မသွားဖြစ်တဲ့ နေ့ ရက် တွေဆိုရင်တော့ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ Wamiles Ioune Lotion အရည်လေး ကို လိမ်းပြီး မျက်နှာရဲ့ အေးမြ မှု နဲ့ ကြည်လင်မှု ကို တစ်နေကုန် ရယူနိုင်စွမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်မ ရဲ့ ၀က်ခြံတွေ ပျောက်ကင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်း နေ့ စဉ် ထိန်းသိမ်းနေတဲ့ မျက်နှာအသားအရည် စိုပြေမှု အတွက် နည်းလမ်းလေး တစ်ခု ပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကျွန်မ မျက်နှာလေးကို ကြည်လင်မှု ရှိလို့ ဘာဆေးတွေ အသုံးပြုသလဲလို့ မေးမေးနေတဲ့ အစ်မ တွေ ၊ ညီမတွေကို ပြောပြချင်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်တစ်ခုပါ ။
ကျွန်မ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ အများစု သစ်ကြတဲ့ အတိုင်း သာမန် မသစ်ဘဲ ၊ နံနက်တိုင်း မေတ္တာပို့ ၊ ဘုရားစာ ရွတ်ပြီးမှ သစ်လေ့ရှိပါတယ်။
မေတ္တာဓာတ် သာလျှင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲမှုများစွာ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်မရဲ့ စိတ်က ကောင်းတဲ့ဖက်မှာရော ၊ ဆိုးတဲ့ဖက်မှာပါ ထက်မြတ် ၊ စူးရှ လွန်းပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကိုသည်းခံနိုင်စွမ်း ကြီးမားတတ်ပေမယ့်လည်း ဒေါသဖြစ်လာရင်တော့ ဘာကိုမှ မမြင်တော့ဘဲ အနိုင်ရဖို့ အတွက် ပြောချင် ရာ ဇွတ်ပြောပြီး ဒေါသ ကိုပိုမိုကြီးထွားလာအောင် မွေးထားတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုး ပိုင်ရှင်ပါ။
အားလုံး သိထားကြပြီး သားပါ ။ ဒေါသ ဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာဟာ အင်မတန်မှ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်လွန်းပါတယ်။
မိန်းကလေးပီပီ ၊ ရုပ်ဆိုးမှာကြောက်တဲ့ ကျွန်မ အတွက် ဒေါသတွေ ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာခဲ့တာက တော့ နေ့ စဉ် မျက်နှာသစ်ရင်း ပို့ သနေတဲ့ မေတ္တာဓာတ်တွေပါပဲ။
“ မေတ္တာပို့ ရင်း မျက်နှာဘယ်လိုသစ်သင့်ပါသလဲ “
နေ့ စဉ်မျက်နှာ မသစ်ခင် အချိန်မှာ သရဏဂုံ ( ၃) ပါးကို ရှိခိုး ဦးတင်လေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ဘုရားဂုဏ်တော် ( ၉) ပါးကို သက်စေ့ ရွတ်ဆိုပြီး ၊ မိဘ နှစ်ပါးကို စိတ်ထဲကနေ ကန်တော့ပြီး မေတ္တာပို့ အမျှဝေပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျမှ မေတ္တာသုတ်တော် ကို ရွတ်ဆိုပြီး
Wamiles အမဲတုံးဆပ်ပြာလေး နဲ့ မျက်နှာသစ်လေ့ ရှိပါတယ်။
၀က်ခြံအထူးပျောက်တဲ့ Wamiles Skin careများ
ဒီလို ကုသိုလ်မျိုးကို နေ့ စဉ် ကျင့်ကြံလာနေတဲ့ အချိန်ကာလ တစ်ခုအရောက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတွေ ဟာ ဆပ်ပြာတုံးလေး အစွမ်းကြောင့် အရှင်းပျောက်ကင်းရုံသာမက ၊ မေတ္တာတန်ခိုးကြောင့်လည်း ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာလေးဟာ တစ်နေ့ တစ်ခြား ကြည်လင်လာတာ သတိထားမိကြတဲ့ သူတိုင်း သိရှိနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မ အနေနဲ့ ချစ်ခင်ရသော ၊ စာဖတ်သူများကို မျှဝေချင်တာက ၀က်ခြံကင်းစင်သောမျက်နှာလေး ကို ဆပ်ပြာကောင်းအသုံးပြုပြီး ၊ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်သလို ၊ မေတ္တာဓာတ် လွှမ်းခြုံနိုင်စွမ်းရှိသော မျက်နှာအကြည်ဓာတ် လေးကို လည်း တရားဓမ္မလွှမ်းခြုံရင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ တောင်းဆု ခြွေရင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။
၀က်ခြံ ကင်းစင်ပြီး စိတ်ထားလှ သော အလှပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြပါစေ။